नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलित सांसदको नाम काटिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
नेता कोइरालाले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै पार्टीले अक्षम्य भूल गरेको बताएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद र समावेशीताबाट नेपाली कांग्रेस कहिल्यै पर जान सक्दैन र जानु पनि हुन्न । तर गण्डकी प्रदेशको सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा समावेशीता र अझ दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई जसरी लत्याइयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीले गरेको अक्षम्य भूल हो । दलित समुदायप्रतिको अपमान हो ।’
गत शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकीको मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका थिए । त्यसमा कांग्रेसका निष्ठावान् नेता मानिने तनहुँका डोवाटे विश्वकर्माको नाम थियो । अन्तिम समयमा उनको नाम काटियो । डोवाटेको ठाउँमा व्यापारिक पृष्ठभूमिका कस्केली सांसद विन्दुकुमार थापा मन्त्री बने ।
गण्डकीको घटनाले पार्टी संगठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको दलित समुदायको शिर निहुरिएको उनको भनाइ छ । यसको जवाफ पार्टीले दिनुपर्ने नेता कोइरालाले बताएका छन् ।
‘भोलि कुन मुखले उनीहरूको अगाडि जाने ? यो हेक्का राख्नु पर्दैन ? कि एकपटक सरकारमा गएपछि सधैँलाई पुग्यो ? सामाजिक न्यायका कुरा केवल इतिहासको बखान र शब्द रटान मात्रै होइन व्यवहार र लोकतान्त्रिक आचरण पनि हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘ बीपी स्मृति दिवस मनाउँदै र वीपीको तस्वीरमा चढाएको फूल नओइलिँदै गर्दा भएको यो निर्णयको जवाफ हामीले समाजलाई दिनैपर्छ ।’